हिन्दू धर्ममा वेद, पुराण र ग्रन्थहरूको महत्त्व बताइएको छ । यी ग्रन्थहरूले हामीलाई सही मार्गप्रदर्शन गर्छन् । यी शास्त्रहरूमा दिनदिनै बिहानीपख सूर्यलाई जल चढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्य सबै ग्रहका स्वामी हुनुहुन्छ र सूर्यलाई नियमित जल चढाउँदा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँको कृपा पाइँदा जीवनमा सुखशान्ति प्राप्त हुन्छ । यसका अतिरिक्त सूर्यलाई जल चढाउँदा शरीर रोगहरूबाट मुक्त हुन्छ ।
शास्त्रको अनुसरण गरेर सूर्यलाई जल चढाउनु उचित छ अनि यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सूर्य एक तारा हो । यो आगोको एक गोला हो । सूर्यको प्रकाश धर्तीमा परेपछि दिनको शुरुवात हुन्छ ।
मनुष्य लगायत सबै जीवजन्तु र रुखबिरुवालाई जीवित रहनका लागि सूर्य आवश्यक हुन्छ । ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो यो । सूर्यको ऊर्जा नहुने हो भने बोटबिरुवाले भोजन नै पाउँदैनन् ।
बिहानै उठेर ताजा हावा खाँदै उदाइरहेको सूर्यको किरण शरीरमा पार्दा हाम्रो छाला चम्किन्छ र अनुहार तेजिलो हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सूर्यलाई जल चढाउँदा पानीको धाराको बीचमा सूर्यको किरण पर्दा जुन रंग निस्कन्छ त्यसले शरीरलाई धेरै लाभ दिन्छ ।
सूर्यको किरण शरीरमा पर्दा अनेकौं हानिकारक तत्त्व नष्ट गरिदिन्छ र नकारात्मक ऊर्जालाई भगाउँछ । त्यसैले बिहानै उठेर सूर्यलाई जल चढाउँदा शरीरका लागि लाभकारी हुन्छ अनि ज्योतिषको दृष्टिबाट पनि सूर्यको कृपा प्राप्त हुन्छ । यसले जीवनलाई सुख र शान्ति दिन्छ ।
मिठो खाना कसरी बनाउने ? तपाईँलाई काम लाग्ने केही...
हिन्दू धर्ममा अन्तिम संस्कार गरेपछि किन नुहाइन्छ ?
यसरी स्थापित गर्न सकिन्छ जनताको मनमा बस्ने र विश्वास जित्ने शासकीय व्यवस्था
प्रियंकाको पेट देख्दा तर्सिनेहरूका नाममा
उतिबेला राजाहरू दिनदिनै पिउँथे यो एनर्जी ड्रिंक
राम्रो निद्रा लाग्दैन भने शरीरको यो भाग थिच्नुस्
एक हप्तामा एक हजार ५०० तालिवान विद्रोही मारिए
इस्तानबुलबाट ७०९ अवैध आप्रवासी पक्राऊ